Ao Malayzia, Ny fiandrasan’ny zanany vavy iray ela dia ela ny fiverenan’ny rainy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2015 10:13 GMT
Anwar Ibrahim sy ny zanany vavy Nurul Hana Anwar ao amin'ny fonom-boky “Dada Malalako” Sary: Nurul Hana Anwar
Ity lahatsoratra avy amin'i Sarah Ngu ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 25 Novambra 2015. Navoaka teto amin'ny Global Voices indray ary nozaraina ho roa rehefa nahazoana alalana.
Amin'ity fizarana voalohany ity, ampahafantarinay anao i Nurul Hana Anwar, mpanoratra vao avy namoaka boky sy zanakavavin'ny gadra politika Malayziana Anwar Ibrahim. Amin'ny fizarana faharoa no anazavany ny nahatonga azy hamoaka ny fahatsapany amin'ny bokiny manokana Sayang Buat Papa (Dada Malalako).
Zazavavy kely iray mitorovoka ao ambany latabatra, ny lohany miandrandra amin'ny endrika feno fanontaniana. Ny masony sy ny molony misoritra tahotra. Manontany izy, “Fa misy inona ry Ineny?”
20 Septambra 1998. vao avy namaky ny varavaraha ho ao an-trano indrindra ny polisy. Nalaina ny rainy. Ao ivelany, mihaohao ny olona, mihiaka ny teny filamatr'i Malayzia mitaky fihavaozana, “Reformasi!”
Nilaza tamin'ny ny fianakaviana fa misy lehilahy masiaka iray — ny praiminisitra — tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny rainy ho any am-ponja. Niteny taminy ny reniny hivavaka, hatoky an'i Allah.
Ilay zazavavy kely, ny zandriny indrindra amin'ny zaza dimy, dia tsy nilazana fa ny rainy dia efa ambivitry ny ho lasa praiminisitra, ary ankehitriny izy dia lasa gadra politika malaza indrindra ao amin'ny firenena, nomelohina ho nanao sôdômia. Ahoana no hanazavana amin'ny kilonga 6 taona izany “sôdômia”?
Ny anaran'ilay zazavavy dia Nurul Hana Anwar. Satria tazonin'ny fomba Malay ny manoratra ny anaran'ny zaza avy amin'ny fanampin'anaran'ny ray, dia mivaky toy izao ny anarany amin'ny ankapobeny: Nurul Hana, zanak'i Anwar.
Izany Anwar Ibrahim izany dia anaran'olona mpamafa sy mpikarakara tokantrano ao Malayzia. Nankafiziny ny fisandratana haingana dia haingana mankany amin'ny fahefana nandritra ny taompolo 1990; ny gazety TIME nanantona azy eo amin'ny fonon-gazetiboky ho “ilay kintana misandratry ny taranaka mpitarika olona” ao Azia noho ny fanitsiana ara-bola sy ny hetahetam-panitsiana demôkratika ao aminy. Efa ho anjarany ny hisolo ny mpanorolalana azy, ny Praiminisitra Mahathir Mohamed, mandra-pisian'ny fifandirana teo aminy sy ny Dr. Mahathir momba ny rafitra fiahiam-panjakana. Rehefa voaroaka izy tamin'ny 2 Septambra 1998, dia nitarika olona anarivony maro tao amin'ny fihaonana ara-politika notontosainy i Anwar, miantsy ny amin'ny hanesorana ny Dr. Mahathir sy nihiaka ny “reformasi!”
Ary nihetsika ny Dr. Mahathir ka nanao izay hisamborana azy. Hoan'ny maro amin'ny Malayziana, ny fisamborana an'i Anwar no fotoana nifohazan-dry zareo ara-politika; io no fanoitra niteraka ny hetsika reformasi tao Malayzia. Tamin'iny alina iny dia tsapandry zareo fa raha mamely olona ao anatin'ny fahatanjahana tahaka an'i Anwar ny governemantan-dry zareo dia mety ho afa-mamely na iza na iza.
Tsy nahalala na dia kely monja momba ireo zavatra ireo i Nurul Hana rehefa nisy lehilahy maromaro nanao sarontavan'ny mpanao ski sy nitondra basy namaky ny tranon-dry zareo. Io andro io taminy no andro tnahatafasaraka azy tamin'ny rainy — ny andro izay, araka ny nolazain'ny reniny, nanombohany niafenany matetika tao ambany latabatra, nikombonany tamin'ny tenany ihany ary nitsaharany tsy niteny tamin'ny ankapobeny.
Notsongaina avy amin'ny “Dada Malalako” manasongadina ny sarin'ny mason'i Anwar Ibrahim nivonto. Nindramina avy amin'i Nurul Hana Anwar
Raha tsy nahateny intsony izy tamin'ny faha-6 taonany, dia nanomboka niteny indray izy tamin'ny faha-23 taonany. Tamin'ny volana aogositra farany teo, nanao lahateny tao an-drenivohitra izy hamoahana ny bokiny, Sayang Buat Papa (Dada malalako). Fanambatambarana sary milaza ny tantaran'ny tsapan'ny ankizy iray, manana ny rainy nanjavona ho eo ampelatanan'ny “lehilahy ratsy fanahy,” ary nipoitra indray sivy andro taty aoriana tao anatin'ny efitry ny fonja tery amin'ny maso iray mivonto.
Tsy politisiana i Anwar ao amin'io boky io. Dada izy ao, vady — lehilahy izy. Be mpividy ny boky, nahatratra ny laharana fahadimy amin'ny boky tsy tantara be mpividy indrindra ao Malayzia; nivoaka tao Etazonia tamin'ny volana lasa teo ny boky.
Tsy nikasa ny ho mpanoratra i Nurul Hana. Ny boky dia nivoaka avy amin'ny tetikasam-panambatambaran-tsary nataony tany ampianarana. Nihaona izahay indray zoma maraina nandritra ny herinandro voalohany nisokafan'ny sekoly tamin'ny Septambra.
Malefa-piteny sady tia namana, nanao solomaso lehibe sy boribory nipetraka eo antampon'ny takolany feno izy. Tao amin'ny fivarotana kafe izahay, fa tsy nisotro kafe izy, fa sôkôlà mafana no tiany, trohiny tsimoramora mandritra ny fihainoany Radiohead sy fiasany amin'ny tetikasantefibika an-tsary iray hianarana.
Vao avy niverina tamin'ny famoahana ny bokiny izay nitenenany teo anoloan'ny mpanatrika 150 izy, ary maro tamin'ireo no politisiana malaza, mpanangom-baovao ary mpitarika olona. mampihoron-koditra azy izany miteny imasom-bahoaka izany — indray mandeha izy efa nianatra tantara tsangana hiatrehany ny tahotra — saingy nety tsara ny resadresany, hoy izy. Saingy, rehefa nihaona tamin'ny mpanangom-baovao iray izy taty aoriana, dia niangavy azy tsy hitondra fandraisam-peo. Namela ahy handray feo ny resakay izy, saingy miharihary ny tebitebiny tamin'ny hamaroan'ireo fialantsiny sy tsikim-pahamenarana. Ny vatany, araka ny nitarafana azy, dia mbola zatra tamin'ilay vao nahafahany nanoka-bava niteny vao haingana indray.
Tsy kisendrasendra ny fotoana nivoahan'ny bokiny. Tamin'ny febroary lasa teo i Anwar dia mbola nogadraina indray noho ny fiampangana ho nanao sôdômia, fiampangana izay nantsoin'ny vondron'asan'ny Firenena Mikambana iray misahana ny Fanagadrana Olona Tsy Amin'Antony ho “misy ambadika politika.”
Maro no mihevitra, noho ny finoana refôrmista liberaly ananany sy ny maha-silamo mazoto mivavaka azy, ho ambivitry ny hampiray ireo vondrona miozolomana Malay (maro anisan'ny mponina), Shinoa ary Karana mba ahafahany mametraka fiaraha-mientana maro an'isa. Nampihemotra ilalana tanteraka ny mpanohitra ara-politika ny fanagadrana azy, saingy nisy ireo sasantsasany nanontany tena ankarihary raha tokony tsy hiandry an'i Anwar ry zareo fa hikaroka mpitarika olona avy amin'ny taranaka tanora kokoa handray ny fanamoriana.
Tsy miraharaha mihitsy ireo resadresaka ireo ny bokin'i Nurul Hana. Tsy niresaka politika, nivonona ny hampiseho zoro hafa an'i Anwar. Iray amin'ireo sary miverimberina indrindra ao amin'ny boky ny sarin'ny tongon'ny rainy, tsy ahitana afa-tsy kiraro fitondra an-trano. Raha nanontaniana izy hoe nahoana ny tongony no tena nofidiany, mihoatra ny zavatra rehetra aseho, dia namaly izy fa ny hany ahafantaran'ny olona ny rainy indrindra dia ireo sombin-dahatsary na sariny mijoro eo ambony sehatra eo am-pikabariana.
Tamin'ny famerimberenana ny tongony hita manontolo, izay mety ho afangaro amin'ny tongotr'olombelona hafa, no nampisehoany an'i Anwar tsy ao anatin'ny fandrika velarin'ny fananam-pahefana. Raha nanagadra an'i Anwar ny governemanta, dia tsy ny lalana ara-politikany, ny asany ary ny lazany ihany no nesorina taminy. Fa nesroina taminy ihany koa ny maha dadabe, dada ary vady azy. Amin'ny voambolan'i Nurul Hana, “nalainy avokoa ny zava-drehetra,” mbamin'ny vatany.
Raha tokony handeha tsy miaraka amin'ny mpamonjiny ara-politika ny mpanohitra, dia tsy tokony ahankina amin'ny vitany ara-politika loatra intsony ny famotsorana an'i Anwar, fa tokony hifototra kokoa amin'ny hoe tsy misy olombelona mandrika ny ampijaliana ho eo ampelatanan'ny Fanjakana. Ny fototra maha-olona an'i Anwar no tena hiditra an-tsehatra — ary izany no antony mahatonga ny bokin-javakanton'ny faravaviny ho mety kokoa ara-politika, mahatsinjo lavitra ary feno fanantenana kokoa noho izay noheverina.